मस्त निदाउनुहोस र बच्नुहोस मधुमेहबाट - E Net Nepal
Home Health Tips मस्त निदाउनुहोस र बच्नुहोस मधुमेहबाट
मस्त निदाउनुहोस र बच्नुहोस मधुमेहबाट
E NET NEPAL 4:00 AM Health Tips,
सबै जना कम निदाउन चाहन्छन र सकेसम्म चाडै बिउँझन चाहन्छन । भानिन्छ कम सुत्ने मानिस फुर्तिलो हुन्छ । यदि तपाई पनि यहि सोच्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै गलत सोच्दै हुनुहुन्छ । यदि तपाई सोच्नुहुन्छ कि चार पांच घन्टाको निन्द्राले तपाई स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ, भने एकदमै गलत सोच्दै हुनुहुन्छ । तपाईले अब आफ्नो सोचलाई बदल्नै पर्छ र प्रत्येक दिन पर्याप्त निन्द्रा लाग्न दिनै पर्छ । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार यदि तपाईले यसो गर्नुभएन भने तपाईको शरीरमा भएको ब्लड सुगरको मात्रा गडबड हुन जान्छ र तपाईलाई डायबेटीज अर्थात् मधुमेहबाट पिडित हुन पर्ने हुन पनि सक्छ ।
अध्यनकर्ताहरुको कुरालाई मान्ने हो भने गाडीको इन्जिन जस्तै हाम्रो शरीरलाई पनि आराम चाहिन्छ किनकि जब हामी आराम गर्छौं तब हाम्रो शरीर एक प्रकारले मर्मत हुन्छ । यदि शरीरलाई मर्मत हुने पुरा समय प्राप्त भएन भने हामीले विभिन्न प्रकारको समस्याहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । जसको असर ब्लड सुगरमा पनि पर्न सक्छ ।
अनुसन्धान कसरि गरियो ?
अनुसन्धानकर्ताहरुका कुरालाई आधार मान्ने हो भने उनीहरुले आठ बर्षसम्म १००० जनामा अनुसन्धान गरेका थिए । अध्ययनमा सहभागी भएकाहरु दैनिक रुपमा आफ्नो दिनचर्यालाई कम्प्युटरको सहयोगले रेकर्डको रुपमा राख्दथे । र महिनाको अन्तमा यी रेकर्डहरुमा बैज्ञानिक रुपले अध्ययन गरिन्थ्यो ।
निष्कर्ष के निस्कियो त
अध्ययनमा पत्ता लाग्यो कि जो मानिस दिनमा ६ घण्टाभन्दा कम निदाउँथे, उनीहरुको शरीरमा बलाद सुगरको मात्र एकदमै गडबड थियो । तर जो मानिस छ घण्टा वा सात घण्टा भन्दा बढी सुत्थे उनीहरुको शरीरमा बलाद सुगरको मात्रा ठिक थियो ।
यस अध्ययनको प्रमुख डा.लिसाका अनुसार कम निन्द्राले मधुमेहमात्र नभएर डिप्रेशन, मोटोपन, हाई ब्लड प्रेसर हुनुका साथै लोशे हुने पनि सम्भावना बढाउँछ । डा. लिसा अगाडी बताउछिन कि "अब हामि यस कुराको जांच गर्दै छौं कि धेरै सुत्दा पनि ब्लड सुगरमा असार पर्छ कि पर्दैन?"
By E NET NEPAL at 4:00 AM